संविधानसभामा राष्टपतिले अन्तिम सम्बोधनको मौका पाउने – YesKathmandu.com
संविधानसभामा राष्टपतिले अन्तिम सम्बोधनको मौका पाउने
शनिबार ०२, असोज २०७२
काठमाडौ, २ असोज । संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट रहेका राष्टपति डा. रामवरण यादव सन्तुष्ट बनाउन शिर्ष दलहरुले प्रयास थालेका छन् । संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहेका बेला राष्टपति यादवले संविधानसभालाई १६ बुँदे सुझाव पत्र पठाएका थिए । राष्टपतिका सुझावहरु तीन दलले रद्दिको टोकरीमा फालेपछि उनी थप असन्तुष्ट भएका थिए ।
राष्टपति यादवलाई (भोली) आइतबार संविधानसभामा उपस्थित गराउन दलहरुले प्रयास थालेका हुन् । राष्टपति यादवलाई संविधान जारी गर्दा संबोधन गर्न दिने निर्णय तीन दलले गरेका छन् । आज बसेको तीन दलको बैठकले राष्टपति यादवलाई सम्बोधनका लागि समय दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि राष्टपति यादवलाई उपस्थित गराएर संविधान जारी गराउने मात्र कार्य तालिका बनाइएको थियो ।
संविधान जारीको मिति सार्न भारतको प्रस्ताव तीन दलद्धारा अस्वीकार
३३ दलीय मोर्चाले नयाँ संविधानलाई समर्थन गर्ने
One thought on “संविधानसभामा राष्टपतिले अन्तिम सम्बोधनको मौका पाउने”
MADHESHI PRESIDENT LAI HEPNE CHOR NETAHARU
संविधानसभामा गुरिल्ला नाचगान चलेसम्म संविधान बन्दैन : ओली
‘मन्त्री मारा’ अध्यक्ष केपी ओली
मधेसी मोर्चाका मागमा तीन दलको साझा धारणा बन्न सकेन
नेपाललाई ‘बहुराष्ट्रिय’ देशका रुपमा ब्याख्या गर्दै घोषणा पत्र सार्वजनिक
कर्णालीलाई तपाई टाकुरो देख्नुहुन्छ, म ‘सुनको डल्लो’ देख्छु !
विप्लव माओवादीको चार दलीय मोर्चा
घाइतेको उद्धारमा कमल थापा आफैं बढे भीमफेदीको भीरतिर
भारतीय खाद्यमन्त्रीलाइ देउवाको जवाफ,‘चीनले नेपाललाई कहिल्यै समस्यामा पार्दैन’